Fanoharana Momba An’ilay Mpanankarena (Lioka 12) | Fiainan’i Jesosy
Nanome Torohevitra Momba ny Harena i Jesosy
FANOHARANA MOMBA NY LEHILAHY MPANANKARENA
NIRESAKA MOMBA NY GOAIKA SY NY LISY I JESOSY
HISY “ONDRY VITSY” HO AO AMIN’ILAY FANJAKANA
Maro no te hahita sy handre an’i Jesosy tany Jodia. Olona an’arivony no niandry azy tao ivelany, tamin’izy nisakafo tao amin’ilay Fariseo. Efa nisy toy izany tany Galilia. (Marka 1:33; 2:2; 3:9) Tsy nitovy tamin’ny an’ny Fariseo tao amin’ilay fanasana ny toe-tsain’ireo olona ireo.
Nisy heviny manokana ho an’ny mpianatr’i Jesosy ilay zavatra nolazainy voalohany hoe: “Mitandrema amin’ny lalivain’ny Fariseo, izany hoe ny fihatsarambelatsihiny.” Efa nampitandrina toy izany izy taloha. Tsapany anefa fa tena nilaina io torohevitra io noho ny zavatra hitany tao amin’ilay fanasana. (Lioka 12:1; Marka 8:15) Niseho ho mpivavaka ny Fariseo mba hanafenana ny faharatsiany. Nila naharihary anefa hoe nampidi-doza izy ireo. Hoy i Jesosy: “Tsy misy zavatra tsara afina izay tsy haharihary, na zava-miafina izay tsy ho fantatra.”—Lioka 12:2.
Jodianina angamba ny maro tamin’ireo niangona teo amin’i Jesosy, ary mbola tsy nandre ny fampianarany tany Galilia. Noresahiny indray àry ny hevi-dehibe efa nolazainy. Hoy izy: “Aza matahotra an’izay mamono mahafaty anareo, nefa avy eo tsy mahay manao mihoatra noho izany akory.” (Lioka 12:4) Nantitranteriny toy ny efa nataony fa mila matoky ny mpanara-dia azy hoe hikarakara azy ireo Andriamanitra. Mila manaiky ny Zanak’olona koa izy ireo ary mino fa afaka manampy azy ireo Andriamanitra.—Matio 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.
Nilaza izay nampanahy azy ny lehilahy iray ka niteny hoe: “Mpampianatra ô, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko.” (Lioka 12:13) Nilaza ny Lalàna fa mahazo anjaran-droa amin’ny lova ny lahimatoa ka tsy tokony hisy adihevitra intsony. (Deoteronomia 21:17) Toa nitady anjara mihoatra noho ny tokony ho azy anefa ilay lehilahy. Hendry i Jesosy ka tsy nomba ny iray tamin’izy mirahalahy. Hoy izy: “Fa iza moa, ralehilahy, no nanendry ahy ho mpitsara na mpizara fananana eo aminareo?”—Lioka 12:14.
Nampitandrina ny rehetra i Jesosy avy eo hoe: “Aoka ianareo ho mailo, ary mitandrema amin’izay rehetra mety ho fitsiriritana, satria na manam-be aza ny olona, dia tsy miankina amin’ny zavatra ananany ny ainy.” (Lioka 12:15) Na manankarem-be aza ny olona iray, tsy ho faty ihany ve izy ka hamoy ny zava-drehetra? Nasongadin’i Jesosy izany ka nilaza fanoharana mora tadidina izy. Asehon’izy io fa sarobidy ny laza tsara eo anatrehan’Andriamanitra.
Hoy izy: “Namokatra be ny tanin’ny lehilahy mpanankarena anankiray. Koa hoy izy anakampo: ‘Tsy misy toerana intsony hanangonako ny vokatro, ka inona re no hataoko e?’ Dia hoy izy: ‘Izao no hataoko: Horavako ireo trano fitehirizam-bokatro, ary hanangana hafa lehibe kokoa aho, ka ao no hanangonako ny vokatro rehetra sy ny zava-tsoako rehetra. Dia hilaza amin’ny tenako aho hoe: “Ralehilahy ô, manana zava-tsoa maro voatahiry ho amin’ny taona maro ianao. Mialà sasatra, mihinàna, misotroa, mifalia.”’ Fa hoy Andriamanitra taminy: ‘Ry tsy misaina, anio alina no hisy hanapitra ny ainao, koa ho an’iza ireto zavatra nangoninao?’ Izany koa no hanjo ny olona mihary harena ho an’ny tenany, nefa tsy mba manankarena eo imason’Andriamanitra.”—Lioka 12:16-21.
Nety ho voafandrika hikatsaka harena ny mpianatr’i Jesosy sy ny olon-kafa. Nety ho lasa revo tamin’ny fanahiana eo amin’ny fiainana koa izy ireo, ka tsy hanompo an’i Jehovah. Naverin’i Jesosy àry ilay torohevitra tsara nolazainy tao amin’ny Toriteny teo An-tendrombohitra, herintaona sy tapany teo ho eo talohan’izay.
Hoy izy: “Aza manahy intsony ny amin’ny ainareo, dia izay hohaninareo, na ny amin’ny vatanareo, dia izay hotafinareo. ... Diniho tsara ange ny goaika e! Tsy mamafy na mijinja ireny, sady tsy manana sompitra na trano fitehirizam-bokatra, kanefa Andriamanitra mamelona azy. Tsy sarobidy lavitra noho ny vorona ve ianareo? ... Diniho tsara ange ny fanirin’ny lisy e! Tsy misasatra na manao kofehy ireny, nefa lazaiko aminareo fa na i Solomona tamin’ny voninahiny rehetra aza tsy nitafy toy ny iray amin’ireny. ... Koa aza mitady intsony izay hohaninareo na izay hosotroinareo, ary aza be fanahiana intsony. ... Ny Rainareo mahalala fa mila izany ianareo. ... Aza mitsahatra mikatsaka ny fanjakany, dia homena anareo koa izany zavatra izany.”—Lioka 12:22-31; Matio 6:25-33.
Iza no hikatsaka ny Fanjakan’Andriamanitra? Nilaza i Jesosy fa hanao izany ny “ondry vitsy”, izay olona vitsivitsy tsy mivadika. Nolazaina tatỳ aoriana fa 144 000 monja izy ireo. Inona no antenain’izy ireo? Nanome toky azy ireo i Jesosy hoe: “Sitraky ny Rainareo ny hanome anareo ny fanjakana.” Tsy ho variana hikatsaka harena eto an-tany izay mety hisy hangalatra izy ireo. “Harena any an-danitra tsy mety lany” kosa no hiraiketan’ny fony, satria hiara-manjaka amin’i Jesosy any izy ireo.—Lioka 12:32-34.
Ahoana no namalian’i Jesosy ny fangatahan’ny lehilahy iray momba ny lovany?
Nahoana isika no tokony hisaintsaina tsara an’ilay fanoharana nolazain’i Jesosy?
Inona no nolazain’i Jesosy momba an’ireo hiara-manjaka aminy?
Hizara Hizara Nanome Torohevitra Momba ny Harena i Jesosy